Home / समाचार / “बाको यस्तो कुराले बर्षमान पुन भावुक बने, अोनसरीले त आँसु नै झारिन्। सोचे होलान् , ‘तिमीलाई सुरुवाल किन्दिने छोरोलाई चुँडेर लाने हामी नै हौं ।’ भिडियो सहित !!
“बाको यस्तो कुराले बर्षमान पुन भावुक बने, अोनसरीले त आँसु नै झारिन्। सोचे होलान् , ‘तिमीलाई सुरुवाल किन्दिने छोरोलाई चुँडेर लाने हामी नै हौं ।’ भिडियो सहित !! 0
खुसीको मेसेज शेयर गरेर सहयोग गरिदिनू है यो भिडियो। Prem Baniya